ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတ်လ - ကမ္ဘာ့မတ်လ
ပင်မစာမျက်နှာ » ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတ်လ၏စာအုပ်
အရွယ်အစား ၃၀ x ၂၂ စင်တီမီတာ၊ စာမျက်နှာ ၄၀၀ (အရောင် ၃၅၀ နှင့်ခ / w ဖြင့် ၅၀) ရှိသည်။ အတွင်းပိုင်းစက္ကူ - Matte Couché ၁၀၀ ဂရမ်။ အရောင်နှင့် 30 ဂရမ်၏ offset သည်။ 22/400 အဘို့။ soft အဖုံး။ ခုံနှင့်အတူဖုံးအုပ် 350 ဂရမ်။ Matte ပလပ်စတစ်။ ခညျြနှောငျ: PUR သို့မဟုတ်ချုပ်။
စာအုပ်ထုတ်ဝေခြင်းသည် TPAN ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားနေကြသည်။ ထိုကိစ္စတွင်ထိုစာအုပ်တွင်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုပါလိမ့်မည်။
ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ပြည်တွင်းထုတ်ဝေမှုအရေအတွက်၊ ပုံနှိပ်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်နှင့်နိုင်ငံအတွင်းရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်း စား၍ အသင့်တော်ဆုံးနေရာများကိုရှာဖွေနေကြသည်။
တစ်ခုမှာပြည်တွင်းရေးမဟုတ်သောစီးပွားဖြစ်မဟုတ်သောကုန်ကျစရိတ် ၂၀ ယူရိုဖြင့် (တစ်နိုင်ငံချင်းစီအတွက်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပါအ ၀ င်) ပေးသွင်းခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအဖွဲ့အစည်းများမှတဆင့်ပေးပို့လိမ့်မည်။MSGySV, World March နှင့်အခြားသူများ).
နောက်တစ်ခုကကုန်သွယ်ရေးတိုက်နယ် (ကြိုတင်မှာကြားရန်မလိုဘဲ) တွင် - စျေးနှုန်းဟာယူရို ၅၀ ဖြစ်သည်။ ဒီတိုက်နယ်ကိုနိုင်ငံတကာဖြန့်ဖြူးတဲ့စာအုပ်ဆိုင်များ (Amazon, Casa del Libro, bookstores သို့မဟုတ်အခြားစီးပွားဖြစ်ဆားကစ်များ) မှဖြတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဤဒုတိယမြောက် circuit သည်နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းမှုထက် ၂ လအကြာတွင်သက်ရောက်လိမ့်မည်။
စာအုပ်များကိုယခုအချိန်တွင်ကြိုတင်စာရင်းပေးပြီးအောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်အထိပေးချေနိုင်သည်။ စာရင်းသွင်းမှုအမှာစာပိတ် အမှာစာအသစ်များသည်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကိုယူရို ၅၀ ဖြင့်သုံးစွဲရမည်။
စာအုပ်တင်ပြချက်များကိုနေရာဒေသတစ်ခုစီတွင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ဤစာအုပ်သည်ပူးပေါင်းသူများ၊ ပါဝင်သူများနှင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရန်အလွန်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မည် 2ªMM နှင့်3ªMMကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းအတွက်သာမကယခင်လုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုတွန်းအားပေးရန်ဖြစ်သည်။
နိုဝင်ဘာလတွင် UN CAMINO A LA PAZ y LA NOVIOLENCIA ရုပ်ပြစာအုပ်ကိုထုတ်ဝေလိမ့်မည်။
၁ မတ်လ ၁ ရက်မှ စတင်၍ ဗဟိုနှင့်တောင်အမေရိကချီတက်ပွဲများမှစာအုပ်ငယ်များရှိသည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှစာအုပ် ၁၀ အုပ်ထက်ပိုသောအမှာစာများတွင်ထိုလက်ဆောင်များပါ ၀ င်လိမ့်မည်။
15/9 - စာအုပ်အမှာစာစတင်ခြင်း။
2/10 - ZOOM - ဒုတိယအကြိမ် MM စာအုပ်၏ကမ္ဘာအနှံ့ရောင်းချမှု။ ၁၀ နာရီ ကော့စတာရီ, 2am ။ ကိုလံဘီယာ၊ ပနားမား၊ အီကွေဒေါ၊ ၁၂ နာရီ။ Sao Paulo ဘရာဇီး, ချီလီ, 10pm အာဂျင်တီးနား, 11pm ။ မော်ရိုကို, ညနေ 12 နာရီ။ ဗဟိုဥရောပ, 13:17 p.m. အိန္ဒိယ, 18:21 p.m. နီပေါ, 30h တောင်ကိုရီးယား, 21/45
3rd MM ၏ကြေငြာချက်
၁၁/၁၅ - ငွေပေးချေရန်အမိန့်များကိုပိတ်ပြီးအဆုံးသတ်ပါ။
15/11 - Layout ၏အဆုံး
30/11 - ပုံနှိပ်ဖို့ Entry
15/12 - ပုံနှိပ်စာအုပ်
ဘယ်လို ၀ ယ်မလဲ၊
အောက်ပါပုံစံကိုဖြည့်ပါ - https://docs.google.com/forms/d/16N-u1n0Tacyz-a7J-aMsk-j60A9Knn5YPG4_hlGMBTY/
သို့မဟုတ်လိပ်စာသို့အီးမေးလ်ပို့ပါ book@theworldmarch.org အောက်ပါအချက်အလက်များကိုညွှန်ပြ: အမည်၊ လိပ်စာ၊ မြို့၊ နိုင်ငံ၊ အသင်းအဖွဲ့၊ နိုင်ငံကုဒ်နံပါတ်၊ အီးမေးလ်နှင့်သိုလှောင်ထားသောမိတ္တူအရေအတွက်တို့ပါရှိသည်.
၀ င်ငွေအတွက်စက်တင်ဘာ ၃၀ မတိုင်မီအပ်ငွေပေးရမည့်စာရင်းနံပါတ်မှာ -
IBAN ကုဒ်ကို: ES16 1550 0001 2500 0827 1421
ခေါင်းစဉ် - ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်ဘို့ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လ